Zawgyi Keyboard for iOS5- Saturngod
Zawgyi Keyboard for iOS 5
Posted on Updated January 31, 2013 February 18, 2012 by saturngod
ဇော်ဂျီ keyboard iOS5အတွက် မိုးစက် က ရေးထားပေးပါတယ်။ iPhone , iPodTouch, iPad မှာ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ သွင်းပုံ သွင်းနည်းကတော့
Jaiblreak လုပ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
http://cydia.macforus.com ကို cydia package source မှာ ထည့်ပါ။
Changes Tab အောက်မှာ
Zawgyi Keyboard For iOS 4.3 ကို သွင်းပါ။ ( သွင်းထားပြီးလျှင် ထပ်သွင်းရန် မလိုပါ။ )
MMKeyboard ကို သွင်းပါ။
Setting အောက်က Keyboard အောက်က International Keyboards အောက်က Add New Keyboard… ကို သွားပါ။
Czech ကို နှိပ်ပါ။
ပြီးလျှင် ကမ္ဘာပုံလေးကို နှိပ်ပြီးတော့ ဇော်ဂျီရိုက်လို့ရပါပြီ။
ရေးသားပေးတဲ့ Developer မိုးစက် ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Update: landscape တွေမှာ ပြဿနာလေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ မနက်ဖြန် version အသစ် ထပ်ပြီးထုတ်ပေးမည်ဟု developer မိုးစက် က ပြောပါတယ်။
Close Comments Show all 58 Comments
« Mountain Lion Update mmwebfont »
Thank you ko Saturn and ko moe seth.
Sezin Lynn says:
Not working on my jailbroken iPad, iOS 5.0.1
I can’t see Czech keyboard after installed on my ipad2. Any help Plz.
ei shwe sin latt says:
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့် keyboard မှာ ????? တွေပံပေါ်နေတယ်ရှင့် ကူညီပါဦး
read this http://www.moeseth.com/2012/02/zawgyi-keyboard-showing-instead-of.html
I did the same as your instruction. But after I press install button only appear ” Cannot comply” “Note: The requested modifications cannot be applied due to required dependencies or conflicts that cannot be automatically found or fixed.”
Can you please guide me what to do.
သွယ်လင်းဆက်says:
Thz so much bro.
iphone 4s ios5မှာက zawgyi 4.3 font သွင်းလို့မရပါဘူး..
ZAWGYI IOS ဖောင့်နဲ့ ပဲ အဆင်ပြေပါတယ်..
အခု ကီးဘုတ်သွင်းတော့ သွင်းလို့ရပေမယ့် ကီးဘုတ်မှာတော့ ENGLISH လိုပဲ ပေါ်ပါတယ်..
Min Htin says:
Try to install zawgyi keyboard 4.3 or zawgyi keyboard iOS after that I think u can see Myanmar font, I also try like that and now ok.
all ok… 🙂 thanks you so much..thz u. ko moe sat n saturngod. 🙂
i m ok to install already.
IPad2မှာရော သုံးလို့ရမရ သိချင်ပါတယ်. ဖုန်း မှာတော့ ရပါတယ် ကျေးဇူးပါ…… 🙂
thank you bros……
Not working on iPad2iOS 5.0.1 yet. Please advice, Bro!
I got it. Thx to all developer,poster and who help me from this blogger.
Zawgyi Font ကို install လုပ်ပြီးသားပါ။face book တို့ gmail တို့မှာ မြန်မာစာကိုမြင်နေရပါတယ် ။အဲဒါနဲ့ ကီးဘုတ်ကို install လုပ်လိုက်ပါတယ်။ setting ထဲမှာ ပြောသလို keyboard ကို ရွေးပြီးကြည့်လိုက်တော့ ကီးဘုတိမှာ ???? တွေပဲ တွေ့ရပါတယ်။အဲဒါနဲ့ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို Cydia မှာ သွားပြီး remove လုပ်လိုက်ပြီး အသစ်ပြန် Install လုပ်လိုက်တာမှာဖုန်းကပြန်တက်မလာတော့ပါဘူး ။loading ပဲ လုပ်နေပါတယ် ။ itune ကနေလည်း restore ပြန်ခေါ်လို့ မရတော့ပါဘူး ဘာမှကို တက်မလာတော့ပဲ Loading sign ပဲ ပြနေပါတယ် ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိတဲ့သူများရှိရင် ဖြေပေးကြစေလိုပါတယ် ။ ကျေးဇူးပါ
Hi, I faced the problem like U. Then I sent my Ipod touch 4th Gen to repair shop. They said that IOS 5.0.1 can’t install Myanmar Keyboard. If U install, U will face the problem like this again.
Hi bro… I am using iPhone4with iOS 5.0.1… I already installed ZawGyi OS… I tried to install ZawGyi Keyboard with the following instructions… But I still gotaproblem with that ZawGyi Keyboard… After add keyboard in the setting… cannot type myanmar font… also not appear myanmar keyboard layout… And I just noticed that it installation affected on my original keyboard layout, U.S, on some application like Find My Friend, Find My iPhone and Appstore when I typed password and email address. When I changed to number side, it appeared myanmar font. In the side of a,b,c,d, it showed English letter… When i tried to my friend phone, it is all OK… Please help me… Thank you…
U try to install zawgyi keyboard 4.3 also and then u check yr keyboard appear or not . I also the same problem and then I install both keyboards(4.3&ios 5). After that I can use Myanmar keyboard .
After install MMKeyboard for ios5,zawgyi key board 4.3,zawgyi font 4.3,choose Czech . Myanmar from setting, I can see Myanmar font can use Myanmar keyboard , but can’t use at web page mostly middle roll . Just come out as Khamer or lookalike mon alphabet . How can I do?
Ths alots bro!iPhone mar tot ok par tal.but iPad2 mar ma ok but pyit nay tal bya!
ကီးဘုတ်မပေါ်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဗျ 3gs ios5ပါ
Try to install zawgyi keyboard 4.3 also I means you have to install both keyboards iOS5& 4.3 and then you can use Myanmar keyboard. I also used 3GS phone.
its not ok on 3Gs Bro, pls help some advise,
First u install zawgyi font 4.3 and then u have to install zawgyi keyboard 4.3 & iOS 5
After that u go to setting/general/keyboard and add international new keyboard and select Czech & Myanmar (1 by 1)and then
Try to use Myanmar keyboard . I did like that and ok now for 3GS phone.
ကိုစည်သူ နဲ့ ကိုစိုင်းအောင်စိုင်း
power button ကို ၃ စက္ကန့် နှိပ်ထားလိုက်ပါ ပြီးရင် power button ကို မလွတ်ပဲနဲ့
home button ကို ၁၀ စက္ကန့် ဆက်နှိပ်ထားပါ ၁၀စက္ကန့် ပြည့်ရင် power button ကို လွတ်လိုက်ပါ
home button ကိုဆက်နှိပ်ထားရင်းနဲ့ နောက်ထပ် ၁၅ စက္ကန့် ထပ်နှိပ်ထားပါ
ပြီးရင် အကို့ ဖုံးမှာ အမည်းရောင် screen ပဲမြင်နေရလိမ့်မယ် အဲဒီတော့မှ အကို့ ဖုံးနဲ့ iTunes နဲ့ ဆက်သွယ်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် restore လုပ်မယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ် အကို ကျေးဇူးပါ၊၊
Pingback: » MyanmarKeyboards for iOS5 » IT-KOKO
谢 谢 。我可以安装了。
I install zawgyi 4.3,MMKeyboard iis5,after install can see mmfont, add new keyboard Czech , all keyboard disappear , remove and reinstall at the keyboard showing Myanmar 123 and at the space bar zawgyi only just can see. Help me
အကိုရေ MMkeyboard iso5ထည့်ဖို့အတွက် Zawgyi font 4.3 install တဲ့အချိန်မှာ install လုပ်ပြီးလို့ Springboard restart လုပ်တဲ့အချိန်မှာ screen အမဲရောက်နဲ့ အလည်မှာ ဒုတ်ချောင်းလေးတွေလည်နေတဲ့နေရာမှာ ရပ်နေတယ်.. တညလုံးလွတ်ထားလဲ ဘာမှပြန်မပေါ်လာဘူးဗျ… ဖုန်းကို ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်လဲ အဲဒီအတိုင်းပဲ restore ပြန်ပြန်လုပ်ပေးရတယ်..အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကူညီပါအုံး..ကျေးဇူးပြုပြီးတော့…